Apple Misokatra fisoratana anarana ho an'ny tapakila tapakila ho an'ny WWDC 2016 | Avy amin'ny mac aho
Omaly alatsinainy Apple nohamafisina tamin'ny alàlan'ny Siri fa ny WWDC amin'ity taona 2016 ity dia hatao ny 13 ka hatramin'ny 17 Jona. Na izany aza, nanokatra ny fisoratana anarana ihany koa izy io mba hahafahan'ny mpandraharaha misoratra anarana amin'ny fividianana tapakila amin'ity fihaonambe eran-tany ity ankalazaina isan-taona izy io miaraka amin'ny vaovao mifandraika amin'ny rindrambaiko sy ny tsy ampoizina fitaovana hafa.
Ny fisoratana anarana hiditra ny raffle dia misy amin'ny 18 aprily hatramin'ny zoma 22 aprily. Ny fepetra takiana, araka ny nolazaiko teo aloha, dia ny tsy maintsy ahitanao ny mpikambana ao amin'ny programa Apple developer hanana zonao hahazo tapakila, raha mbola tsy iray ianao dia tsy afaka miditra amin'ny raffle intsony na dia misoratra anarana anio aza, na dia manan-jo eo am-baravarana aza ianao dia tsy maintsy mandoa izany 1.599 $ total Na dia toa be dia be aza izany, dia sarobidy ny manatrika sy mizara fahalalana ary indrindra ny fifandraisana amin'ireo mpamorona na orinasa hafa.
Ny fihaonamben'ny Apple Developers dia hihaona ao amin'ny Auditory Bill Graham Civic manan-tantara amin'ny alatsinainy tsy azo hadinoina amin'ny volana jona izay hihaona ny vondrom-piarahamonina mpamorona iray manontolo avy amin'ny Apple hianatra momba ny hoavin'ny OS X, iOS, watchOS, ary TVOS. Keynote dia mampanantena fisehoan-javatra vaovao manaitra izay nolazain'i Apple fa hanome aingam-panahy sy fotoana vaovao hanohizana hamorona fampiharana farany manavao ny tany. Amin'ny faran'ny andro ary mifanaraka amin'ny fomban-drazan'ny mpandraharaha, ny loka dia hotanana ho an'ny tena miavaka indrindra amin'ny taona amin'ny Apple Design Awards.
Ankoatr'izay, mandritra ny herinandro dia hisy injenieran'ny Apple mihoatra ny 1.000 izay hampianatra laboratoara maherin'ny 150 ary ny hetsika hanomezana sary ho an'ny mpamorona miaraka amin'ny fanampian'ny manam-pahaizana ary amin'ny fomba tena manokana. Hisy mpandahateny vahiny, mozika mivantana ary maro hafa koa.
Ka raha mpamorona ianao ary mivelona amin'izany, dia alao antoka fa misoratra anarana amin'ny fanomezana ianao alohan'ny zoma amin'ny alàlan'ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Apple dia manokatra fisoratana anarana amin'ny fisarihana tapakila ho an'ny WWDC 2016